Accueil > Gazetin'ny nosy > Filohan’ny Hcc: Sady mpitsara no tsaraina ?
Filohan’ny Hcc: Sady mpitsara no tsaraina ?
Rahampitso zoma no mifarana ny 72 ora nomen’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (Hcc) an’Ingahy Filohampirenena Rajaonarimampianina, mba hamaliany na hanolorany ny fehin-teny fiarovan-tenany, noho ny fitorian’ireo Solombavambavahoaka 73 ho nanitsakitsaka ny andininy faha-167 ao amin’ny Lalàmpanorenana, tamin’ny tsy nahavitan’Ingahy Filohampirenena nametraka ny Fitsarana avo na “Haute Cour de justice” tao anatin’ny herin-taona nandraisany ny fahefam-panjakana.
Dia mbola mitady irika handrirarirana ny raharaha ihany koa ny filohampirenena ka nangataka tamin’ny Hcc izy hoe “mba omeo 15 andro izahay handrafetanay ny fehin-teny fiarovan-tenanay”.
Mazava be ny tetik’i Mavoloha eo dia ny hananganany ao anatin’izay 15 andro izay an’io Fitsarana Avo io, ka aorian’izay dia tsy afaka haninona intsony ny Hcc, afa-tsy ny handa na hitsipaka na tsy handray na hilaza ny tsy fahamarinam-pototra ny fitorian’ireo solombavambahoaka 73.
Fa na hoeken’ny Hcc na tsy hoekeny ilay fangatahan-dRajaonarimampianina 15 andro dia mampihivingivin-doha ny nandre omaly fa ny filohan’ny Hcc, INgahy Jean Eric Rakotoarisoa ihany no mandrafitra ny fehin-teny fiarovan-tenan-dRajaonarimampianina hatolotra ny Hcc.
Tena ara-bakiteny eto ny hoe “sady mpitsara no tsaraina” (juge et partie), hoy ny fitenenana. Tena resaka fitsarana mantsy izy ity ka ny mpitsara, dia ny filohan’ny Hcc no mitarika azy 8 mianadahy mpanolotsaina avo ao, ary tsaraina koa izy satria miantefa amin-dRajaonarimampianina ny fitoriana na fihampangana, nefa dia ilay mpitsara, filohan’ny HCc, Rakotoarisoa Jean Eric no miara-mikaon-doha amin’ny fandrafetana ny fehin-teny fiarovan-tena’ingahy filohampirenena.
Izany rehetra izany no tsy mampitombina an’io fampifanatonaa ataon’ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy tarihin’i Maka Alphonse io.
Tsy tokony hadinoina fa ankoatra ity fitoriana eny amin’ny Hcc nataon’ny depiote 73 Ity dia mbola eo koa ny fitoriana eo anivon’ny fitsarana momba ny ady heloka, dia ny fitifirana an’ireo maty tamin’ny sabotsy 21 Aprily. Eo koa ny fitoriana momba ny ady heloka ihany, izay nalefa eny amin’ny Bianco, momba ny kolikoly. Dia izany rehetra izany no hosarontsaronana na hotakonana na hofafana amin’io fampifanatonan’ny Komitin’ny fampihavanaa Malagasy io?
Ary ity resaka fampifanatonan’ny “Cfm” ity koa dia mahatsikaiky. Hararaotin-dry zareo ny feo nandroaka sy nilaza ny tsy fankasitrahana ny Fianakaviambe iraisam-pirenena (Sadc, Vondrona Afrikanina, Vondrona Eraopeanina, Firenena Mikambana… izay nitady hitsabaka indray amin’ny raharahan-tokantranon’ny Malagasy, ka nasaina nandeha nody ireo vahiny ka ny “CFm” indray no miaka-tsehatra mampifanatona. Dia hoe “resaky ny samy Malagasy ity”. Etsy ankilany anefa, na ny toerana anaovana ny fampifanatonana aza dia any amin’ny lafin-tanin’ny vahiny (territoire etranger) satria any amin’ny masoivohon’ny fanjakana Vatikanina (nonciature), ary notsindriana mihitsy ny hoe “nahazoana tso-drano tamin’ny Papa Ray masina io fifanatonana ataon’ny “CFm” io. Fanjakana vahiny ange izany Vatikanina misy ny Papa Ray masina izany e!
Dia iza no mino fa tsy saribakolin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena ny ao amin’ny “Cfm” tarihin’i Maka Alphone, ankoatra ny tsy maintsy hiarovany ny olona nanendry an-dry zareo ao, dia ny filohampirenena amperin’asa?